ယခုနှစ်မှာ မိတ်ဆက်မယ့် ၆.၁ လက်မ iPhone လား? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone ယခုနှစ်မှာ မိတ်ဆက်မယ့် ၆.၁ လက်မ iPhone လား?
ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာတော့ အိုင်ဖုန်းအသစ်များကို ကြေညာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း အိုင်ဖုန်း မော်ဒယ်သုံးမျိုးကို မိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်ပြီး iPhone X အသစ်၊ အရွယ်ကြီး iPhone X Plus နဲ့ တန်ဖိုးသင့် LCD Model ( Face ID ပါသော)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီအထဲက အိုင်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ ဓါတ်ပုံများ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
သူကတော့ ၆.၁ လက်မ အရွယ် iPhone ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးနည်း မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ OLED အစား ဈေးသက်သာတဲ့ IPS LCD Display ကိုသာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံအရတော့ မျက်နှာပြင် အချိုးဟာ 19.5:9 ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ဘေးဘောင်များက အလွန်ပါးလွှာပါတယ်။ Notch လည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အရှေ့နဲ့ အနောက်ဟာ ဖန်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခြား အိုင်ဖုန်း မော်ဒယ်နှစ်ခုမှာတော့ ၅.၈ လက်မနဲ့ ၆.၅ လက်မ မျက်နှာပြင်များ တပ်ဆင်ထားမယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ Apple iPhone အသစ်တွေမှာ 18W USB-PD adapter တွေနဲ့ USB-C to Lightning cable ပါ တစ်ခါတည်းပါလာတော့မှာပါ။ ဒါက Apple အတွက် တခြား Android ဟန်းဆက်တွေထက်ကို အားသွင်းပိုမြန်စေတဲ့ပမာဏကြီးပါပဲ။ သူ့ရဲ့ 18W adapter တွေနဲ့သာဆို ၁နာရီခွဲတောင်မပြည့်ခင်ဘဲ အားအပြည့်ဖြစ်နေမှာပါ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ပိုက်ဆံအပိုထပ်မကုန်တော့ဘဲ iPhone တွေကိုအားအမြန်သွင်းနိုင်တော့မယ့်အချိန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
ယခုနှဈမှာ မိတျဆကျမယျ့ ၆.၁ လကျမ iPhone လား?
ယခုနှဈ စကျတငျဘာလမှာတော့ အိုငျဖုနျးအသဈမြားကို ကွညောတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ စုစုပေါငျး အိုငျဖုနျး မျောဒယျသုံးမြိုးကို မိတျဆကျမှာ ဖွဈပွီး iPhone X အသဈ၊ အရှယျကွီး iPhone X Plus နဲ့ တနျဖိုးသငျ့ LCD Model ( Face ID ပါသော)တို့ ဖွဈပါတယျ။ အခုတော့ အဲဒီအထဲက အိုငျဖုနျးတဈလုံးရဲ့ ဓါတျပုံမြား ပေါကျကွားထှကျပျေါလာပါတယျ။
သူကတော့ ၆.၁ လကျမ အရှယျ iPhone ဖွဈပွီး တနျဖိုးနညျး မျောဒယျဖွဈပါတယျ။ သူ့မှာ OLED အစား ဈေးသကျသာတဲ့ IPS LCD Display ကိုသာ တပျဆငျထားပါတယျ။ ထှကျပျေါလာတဲ့ ဓါတျပုံအရတော့ မကျြနှာပွငျ အခြိုးဟာ 19.5:9 ဖွဈနိုငျပါတယျ။ မကျြနှာပွငျဘေးဘောငျမြားက အလှနျပါးလှာပါတယျ။ Notch လညျး ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ အရှနေဲ့ အနောကျဟာ ဖနျဖွငျ့ ဖုံးအုပျထားတဲ့ ဒီဇိုငျး ဖွဈပါတယျ။
အခွား အိုငျဖုနျး မျောဒယျနှဈခုမှာတော့ ၅.၈ လကျမနဲ့ ၆.၅ လကျမ မကျြနှာပွငျမြား တပျဆငျထားမယျလို့ သတငျးထှကျနပေါတယျ။ Apple iPhone အသဈတှမှော 18W USB-PD adapter တှနေဲ့ USB-C to Lightning cable ပါ တဈခါတညျးပါလာတော့မှာပါ။ ဒါက Apple အတှကျ တခွား Android ဟနျးဆကျတှထေကျကို အားသှငျးပိုမွနျစတေဲ့ပမာဏကွီးပါပဲ။ သူ့ရဲ့ 18W adapter တှနေဲ့သာဆို ၁နာရီခှဲတောငျမပွညျ့ခငျဘဲ အားအပွညျ့ဖွဈနမှောပါ။ နောကျဆုံးတော့လညျး ပိုကျဆံအပိုထပျမကုနျတော့ဘဲ iPhone တှကေိုအားအမွနျသှငျးနိုငျတော့မယျ့အခြိနျရောကျလာခဲ့ပါပွီ။
Previous articleဇွန်လ 12 ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်သွားမယ့် Vivo NEX စမတ်ဖုန်း
Next article32G Model ထွက်ရှိလာတဲ့ Xiaomi Mi 6X